Ndị na - emepụta Bib Aprons - China Bib Ndị na - enye Ndị Na - ahụ Maka Supplierslọ Ọrụ & Ndị Ọrụ
Nwa White Strips Chef Bib Aprons na Otu akpa CU304S8600H
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU304S8600H Size NA SIZE Isi okwu chef apron, bibron, apron owu, ile nke eji akwa 65/35 poly / owu GSM.235g Sewing string Polyester thread ana akpokwa ya thread ike di elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, na-eguzogide ...
Adarọ ekwenti ogbe edo edo edo edoro anya na ogwe osisi abuo CU305S8600H
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU305S8600H Size NA SIZE Isi okwu mkpịsị ugodi, kichin kichin, onye isi nri, ụlọ ejiji Ejiri 65/35 poly / owu GSM.235g A na-akpọkwa eriri Polyester akwa nwere ike dị elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo ihe mgbochi abrasion, shrinkage dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, na-eguzogide ...
Kanvas Chef Bib Apron na akpa ato CU335S135022U4
Brand CHECKEDOUT Nkan Code CU335S135022U4 Size ONE SIZE Isi okwu chef apron, apron, canvas, ejiji ndi ozo 45/55 poly / owu GSM.300g Sewing string Polyester thread ana akpokwa ya thread ike di elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, resista ...
Blue Agba Canvas Chef Bib Apron na Polo atọ CU335S048022U4
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU335S048022U4 Size NA SIZE Isi okwu chef apron, bibron, akwa ejiji, akwa ile ọbịa Ejiri 45/55 poly / owu GSM.300g Sewing string Polyester thread ana akpokwa ya thread ike di elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, resista ...
Akpụkpọ odo na-acha odo odo Canvas Chef Bib Apron with Pocket atọ
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU335S043022U4 Size ONE SIZE Key word chef apron, bib apron, kanvas, ejiji ile ọbịa Ejiri 45/55 poly / owu GSM.300g Sewing string Polyester thread ana akpokwa ya thread ike di elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, resista ...
Army Green Agba Canvas Chef Bib Apron na Polo atọ CU335S042022U4
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU335S042022U4 Size ONE SIZE Key word chef apron, bib apron, kanvas, ejiji ile ọbịa Ihe eji eme akwa 45/55 poly / owu GSM.300g Sewing string Polyester thread ana akpokwa ya thread ike di elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, resista ...
Black Canvas Chef Bib Apron na Polo atọ CU335S001022U4
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU335S001022U4 Size NA SIZE Isi okwu chef apron, apron, akwa ndibe ya, Ulo ejiji 45/55 poly / owu GSM.300g Sewing string Polyester thread ana akpokwa ya thread ike di elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, resista ...
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU352S119000AG Size NA SIZE Isi okwu crossback apron, apron Fabric 70/30 poly / owu GSM.265g Sewing string Polyester thread ka ana akpokwa akwa ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide mildew, na-enweghị ikpu….
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU352S118000AG Size ONE SIZE Key word crossback apron, apron Fabric 70/30 poly / owu GSM.265g Sewing string Polyester thread ka ana akpokwa akwa ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide mildew, na-enweghị ikpu….
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU352S117000AG Size ONE SIZE Key word crossback apron, apron Fabric 70/30 poly / owu GSM.265g Sewing string Polyester thread ka ana akpokwa akwa ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide mildew, na-enweghị ikpu….
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU352S129000T Size ONUZE SIZE Isi okwu COSSBACK, apron Fabric 20/80 poly / owu GSM.346g Sewing string Polyester thread ka ana akpokwa eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide mildew, na-enweghị ...
Ezigbo Akpụkpọ Akpụkpọ Akpụkpọ Akpụkpọ anụ Chef Apron CU355S134011U4
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU355S134011U4 Size NA SIZE Okwu dị mkpa Akpụkpọ anụ akpụ akpụ akpụ akpụ, ezigbo mma nri siri nri Akpụ Akpụkpọ anụ Akpụkpọ anụ Akpụkpọ ahụ A na-akpọkwa eriri siri ike dị elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na - eguzogide mildew, na ...